Lego Friends Black Friday သဘောတူညီချက် ၂၀၂၁ Brick Fanatics
Lego Friends Black Friday သည် ၂၀၂၁ ဖြစ်သည်
အရုပ်သေးသေးလေးတွေကမင်းရဲ့အားသာချက်ဖြစ်ရင်နောက်ဆုံးပေါ်အရာအားလုံးကိုမင်းသတိထားဖို့လိုလိမ့်မယ် Lego Friends ဖြတ်ပြီးအပေးအယူ Black ကသောကြာနေ့ နှင့် ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့.
နောက်ဆုံး LEGO Friends အနက်ရောင်သောကြာနေ့အထူးလျှော့စျေး
Zavvi အများအပြားရှိပါတယ် Friends ၎င်း၏ UK နှင့် USA ဆိုဒ်များတွင် လျှော့စျေးများ။ တခြားနေရာ၊ Firestar ကစားစရာ များအတွက်လျှော့စျေးကိုကမ်းလှမ်းနေသည်။ Brick Fanatics စာဖတ်သူများ။ သင့်မှာယူမှုအတွက် 10% လျှော့စျေးအတွက် ငွေရှင်းချိန်တွင် ကုဒ် BF10 ကိုထည့်ပါ။ နောက်ဆုံးပေါ်တွေအားလုံးကို စုစည်းပြီးပါပြီ။ Black ကသောကြာနေ့ ဤစာမျက်နှာရှိ စျေးနှုန်းများ အပ်ဒိတ်များအတွက် နေ့ရက်တိုင်းကို ပြန်စစ်ဆေးပါ။
41684 သူartအင်းအိုင် City ဂရန်းဟိုတယ် - ယခု£ 89.99, £ 71.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
41450 သူartအင်းအိုင် City Shopping Mall - ယခု£ 89.99, £ 69.99 ဖြစ်ခဲ့သည် -သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်-
41395 Friendsတင်ပါးဘတ်စ်ကား - ယခု£ 64.99, £ 54.99 ဖြစ်ခဲ့သည် -သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်-
41682 သူartအင်းအိုင် City ကြောငျး - ယခု£ 59.99, £ 49.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
41683 သစ်တောမြင်းစီးခြင်းစင်တာ - ယခု£ 59.99, £ 47.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
41394 သူartအင်းအိုင် City ဆေးရုံ - ယခု£ 54.99, £ 43.95 ဖြစ်ခဲ့သည်
41689 မှော်ချားဘီး - ယခု£ 54.99, £ 38.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
41681 သစ်တော Camper ဗန်နှင့် Sailboat - ယခု£ 44.99, £ 35.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
41448 သူartအင်းအိုင် City ရုပ်ရှင်ပြဇာတ်ရုံ - ယခု£ 44.99, £ 29.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
41398 Stephanie ရဲ့အိမ် - ယခု£ 34.99, £ 29.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
41423 ကျားလေထုပူဖောင်းတောတွင်းကယ်ဆယ်ရေး - ယခု£ 34.99, £ 29.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
41394 သူartအင်းအိုင် City ဆေးရုံ - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
41398 Stephanie ရဲ့အိမ် - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
41423 ကျားလေထုပူဖောင်းတောတွင်းကယ်ဆယ်ရေး - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
41427 မင်းသမီး Emma ရဲ့ဖက်ရှင်ဆိုင် - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
41448 သူartအင်းအိုင် City ရုပ်ရှင်ရုံ - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
41428 သဲသောင်ပြင်အိမ် - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
41393 မုန့်ဖုတ်ပြိုင်ပွဲ - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
41422 ပန်ဒါသစ်ပင်အိမ် - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
Argos သည် အရေအတွက်များစွာကိုလည်း လျှော့ပေးထားသည်။ Friends အစုံ; နောက်ထပ်လျှော့စျေးတစ်ခုအတွက် TOYS20 ကုဒ်ကို အသုံးပြုပါ။
Lego Friends အနက်ရောင်သောကြာနေ့အထူးလျှော့စျေး
ပေးထားသော၎င်း၏အစုံနှစ်စုံကိုရောင်းချပေးနေပြီဖြစ်သည် LEGO.com အချို့သော p ၌arts အပါအ ၀ င်ကမ္ဘာ၏ 41432 Alpaca Mountain Jungle ကယ်ဆယ်ရေးငါတို့ကကြီးမားတဲ့အရာတွေကိုမျှော်လင့်တယ် Lego Friends ဒီနှစ်။ လက်ရှိအစုစုသည်အစုစုများစွာကိုဆိုလိုသည်၊ ၎င်းအတွက်အလားအလာများစွာရှိသည် Friends Lego အလျှော့အတင်းသတ်မှတ်ပါ။ Black ကသောကြာနေ့ နှင့် ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့.
Lego Friends Black Friday သဘောတူညီချက်အိမ်
မင်းနောက်မှာရှိနေရင် Lego Friends အိမ်၊ သင်ကံကောင်းနေသည် LEGO.comအပါအဝင် 41449 Andrea ၏မိသားစုအိမ်, 41428 သဲသောင်ပြင်အိမ် နှင့် 41679 သစ်တောအိမ်. Black ကသောကြာနေ့ လက်ဆောင်များနှင့်အတူ ဝယ်ယူမှုများအတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီမည့် မည်သူ့ကိုမဆို ကောက်ယူရန် အချိန်ကောင်းဖြစ်သင့်ပြီး 41398 Stephanie's House သည် ယခုနှစ်တွင် အနားယူတော့မည့် လျှော့စျေးများကိုလည်း ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Lego Friends Black Friday သဘောတူညီချက်ဆေးရုံ
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကန့် 41394 သူartအင်းအိုင် City ဆေးရုံ ဆိုလိုသည်မှာ 2021 နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သည်။ Black ကသောကြာနေ့ ၃၇၉ အတွဲကို ကောက်ယူရန် သင်၏နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ ရောင်စုံ Lego Friends ဆေးရုံတွင်အရုပ်ငယ်သုံးကောင်၊ တည်ဆောက်နိုင်သော X-ray စကင်နာ၊ ခေါင်မိုးပေါ်ရှိဥယျာဉ် (မည်သည့်ဆေးရုံကဲ့သို့မဆို)၊ စာမေးပွဲခန်းနှင့်လူနာတင်ယာဉ်တို့ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်အားလုံးအလွန်နှစ်သက်ဖွယ်တစ်ခုအထိပေါင်းသည် Friends Lego set – နှင့် သီအိုရီအရ ချွေတာမှုကို ခံစားနိုင်သည့် တစ်ခု Black ကသောကြာနေ့ နှင့် ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့.
Lego Friends အငြိမ်းစားယူခြင်း Black Friday သဘောတူညီချက်များ
ယခုလောလောဆယ်ရနိုင်သောအစုံများအစုံလင်ထုပ်များ LEGO.comဤမျှလောက်များစွာအံ့ no စရာမရှိပါ Lego Friends line-up သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်ထုတ်ကုန်အသစ်များအတွက်လမ်းစဖြစ်လာသည်။ Jungle Rescue နှင့် Vet Clinic အစုံများစွာသည်နှစ်ကုန်တွင်အငြိမ်းစားယူကြသည်။ 41393 မုန့်ဖုတ်ပြိုင်ပွဲ, 41394 သူartအင်းအိုင် City ဆေးရုံ နှင့် 41395 Friendsတင်ပါးဘတ်စ်ကား.
၎င်းတို့အားလုံးသည် လျှော့စျေးများကို တွေ့မြင်နိုင်သည်။ Black ကသောကြာနေ့ဆိုလိုသည်မှာ စျေးဝယ်ပိတ်ရက်သည် ၀ယ်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ boost သင့်ရဲ့ Lego Friends ယနေ့အထိဆောင်ပုဒ်၏အကောင်းဆုံးအစုံအချို့နှင့်စုဆောင်းခြင်း
မှတဆင့်နှိပ်ပါ အားလုံးစာရင်းအပြည့်အစုံအတွက် Lego Black ကသောကြာနေ့ နှင့် ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ 2021 ခုနှစ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ထားသော စျေးနှုန်းများ နှင့် နောက်ဆုံးထွက် အပ်ဒိတ်များအားလုံးအတွက် ဤစာမျက်နှာကို မှတ်သားပါ။ Lego Friends လျှော့စျေးနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုများ